သင့်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိသည်၊ အကယ်၍ သင့်ဆိုဒ်ကိုမြှင့်တင်လိုသည်မှာသေချာသည်၊ မည်သည့်နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးသင့်သည်၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်တို့အတွက်ငါတို့ကြံစည်သမျှတို့ကိုငါပြင်ဆင်ပြီ။
အမှန်မှာ၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးပိုင်ရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သူ / သူမ၏ site ကိုရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏တည်နေရာကိုရှာဖွေခြင်းရလဒ်များပထမစာမျက်နှာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောအခါကောင်းသောရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ SEO မဟာဗျူဟာမရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ထို့ကြောင့် Semalt သည် SEO (search engine optimization) နှင့် Web Analytics တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Semalt သည် AutoSEO နှင့် FullSEO ကဲ့သို့သော SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီအချက်အလက်အားလုံးကိုမပြောခင် Semalt ဆိုတာဘာလဲ။ Semalt ဘာနှင့်ဘာလုပ်လဲ။ Semalt နှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားအရာများ။ သွားကြရအောင်!
Semalt သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခေတ်မီ။ လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောအိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဌာနချုပ်သည်ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ကိယက်ဗ်တွင်တည်ရှိသည်။ Full-stack ဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိရောက်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဝက်ဘ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝက်ဘ်မာစတာများ၊ လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
Semalt သည်အောင်မြင်သောအိုင်တီစီမံကိန်းများစွာကိုအသက်ဝင်စေခဲ့သည့်ဖန်တီးမှု၊ ပါရမီ၊ တက်ကြွမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုယခုဆယ်နှစ်ကြာအောင်ပြုပြင်နေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကုန်သွယ်ရေးတွင်စစ်မှန်သောမာစတာဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုသည်မူရင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီ ငါတို့သည်သင်တို့အားယနေ့သင်တို့ကိုတင်ပြဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဤနည်းပညာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီများကြောင့်သင်၏ site ၏အလားအလာအပြည့်အဝကိုသင်နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမှန်း၊ မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝနားလည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဂူဂဲလ်နှင့်သင့်ဘ ၀ တွင်မြင့်မားသောနေရာများကိုရောက်ရှိရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ အာမခံချက်ရှိတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပါ။
ယခု Semalt အကြောင်း သင် ပိုမို သိရှိ လာပါ က ၀ န်ဆောင်မှုများအနေနှင့်၎င်းကိုကမ်းလှမ်းသည့်အရာများကိုဆက်လက် လေ့လာကြပါစို့ ။
ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်သလဲ သင်၏စီးပွားရေးကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းအသစ်များဖွင့်လှစ်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ Semalt သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမှန်ကန်စွာကိုးကားရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သော SEO နှင့် Analytics ကိုပေးသည်။
ထို့ကြောင့် SEO နည်းပညာသည်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်အကျိုးအရှိဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် Semalt သည်သင်၏ site ၏မြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Google ၏ TOP တွင် နေရာချထားရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည် ။ visitors ည့်သည်ပိုများများ - ပိုက်ဆံပို! ထို့ကြောင့် Semalt သည်သင့်အား၎င်း၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလိုက်ပါစေ။
၀ င်ငွေများစွာရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်အရာမဆို SEO သည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သော့ချက်စာလုံးတွေကိုရှာဖွေပြီး SEO-optimized META tags တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာတွေသုံးပြီးသင်ဖန်တီးနိုင်တယ်၊ နောက်ပြီးထိုင်ပြီးမှော်ဖြစ်ပျက်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်ပါ။ သို့သော်၊ SEO ဆိုသည်မှာမည်မျှကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိသည်ကိုမူမဖော်ပြနိုင်ပါ။
ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာအလွတ်တန်းပညာရှင်များကိုခန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သူတို့သည်သင့်အားလုံးလုံးလျားလျားထိရောက်မှုကိုအာမခံပေးနိုင်မနိုင်သင်မသိနိုင်ပါ။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမှာသင်၏စီးပွားရေးအတွက် SEO ပြုလုပ်ရန်အေဂျင်စီတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဂူးဂဲလ်ကိုအမှန်တကယ်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွင်းနှင့်ပြင်ပတွင်ကောင်းမွန်သောကောင်းမွန်သောအဆင့်ကိုပေးနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအေဂျင်စီနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် SEO အစစ်အမှန်အဆင့်အားလုံးကို ဦး ဆောင်လိမ့်မည်။
သော့ချက်စာလုံး (များ) သုတေသန။ ။ သော့ချက်စာလုံးများအားလုံးတူညီစွာဖန်တီးမည်မဟုတ်ပါ။ အချို့ကသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက်ဘယ်တော့မျှအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပညာရှိစွာရွေးချယ်သင့်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲ။
နည်းပညာ အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း - ဤနည်းပညာအဆင့်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက် "ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်" ပြင်ဆင်ထားပုံမည်မျှကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏တန်ဖိုးထားမှုကိုရရှိရန်သင်၏အခွင့်အရေးများအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
ပြင်ပ Optimization: ပြင်ပ optimization သို့မဟုတ်လင့်များတည်ဆောက်ခြင်း။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့အခြားလင့်များရယူရန်အကြောင်းပါ။ SEO အများစုသည်၎င်းကို SEO မဟာဗျူဟာ၏ကျောရိုးအဖြစ်ရိုးရှင်းစွာရည်ညွှန်းသည်, သူတို့သည်မှန်ကန်ပုံရသည် (ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှပြန်သွားကြမည်)
နောက်ဆက်တွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - website ည့်သည်များအတွက်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ပါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ထပ်တူပြုလိမ့်မည်။
ယခု မှစ၍ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ပိုမိုနည်းပါးလာအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ ၀ င်ငွေနှင့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုကိုစိုးရိမ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ SEO ဟာသင်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဆီသို့အော်ဂဲနစ် ၀ က်ဘ်အသွားအလာကိုမောင်းနှင်စေပြီးသင်၏အွန်လိုင်းကိုသင့်အားပိုမိုခိုင်မာစေရန် "အခြေခံအုတ်မြစ်ချ" သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရပ်တန့်သွားစေသည်။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအသိပေးနှင့်ထိန်းချုပ်ပါ! သင်၏တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သင့်အားတိကျသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် site ၏တည်နေရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသူတို့၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ အမှန်မှာ Semalt သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်၊ အကယ်၍ သင်ကသူတို့ဆိုဒ်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်မှသာလျှင်။
လေ့လာမှုအားလုံးသည်သင်၏ဆိုက်မှသင် download လုပ်နိုင်သည့် PDF format သို့ပြောင်းလဲသည့်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာမှတစ်ဆင့်သင့်အားတင်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာကိုအီးမေးလိပ်စာသို့ပို့နိုင်သည်။ ဒါကမင်းရဲ့တိုးတက်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေတယ်။
အမှန်မှာ၊ ဂူဂဲလ်ထိပ်ကိုရောက်ရန်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကသင့်ကိုဆာလောင်နေသောခြင်္သေ့ကဲ့သို့လိုက်ဖမ်းနေခြင်းကြောင့်သင်၏ရာထူးကိုအမြဲတမ်းထားရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင့်ကိုဒီထောင်ချောက်ထဲမကျစေဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ web analytics ကိုပြင်ဆင်ထားပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ web analytics သည်စျေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏ရာထူးနှင့်စီးပွားရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းအသစ်များအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးသော webmaster များအတွက် ကျွမ်းကျင်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။
အသိပေးပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ web analytics ကိုစတင်အသုံးပြုပါ။
သော့ချက်စာလုံးအကြံပြုချက်များ - သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးစီးပွားဖြစ်သော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးပါသည်။
ရာထူးသမိုင်း - အချိန်နှင့်အမျှသင်၏သော့ချက်စာလုံးများ၏အနေအထားကိုကြည့်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
သော့ချက်စာလုံးအနေအထား - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စနစ်ပေါ်မှာသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့အနေအထားကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။
ပြိုင်ဘက်ရှာဖွေရေး - သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရာထူးများကိုသုတေသနပြုပါ။
သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အချက်အလက်ကသင့်ရဲ့လူကြိုက်များမှုနှုန်းကိုဖော်ပြပြီးသင့်ကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်လစီကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်
ဝဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ - သင့် site ၏ site ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် SEO လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
Semalt ကမ်းလှမ်းမှုသည်မည်သည့် SEO လှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Semalt သည် AutoSEO နှင့် FullSEO ကဲ့သို့သော SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အခုသူတို့အကြောင်းမင်းတို့ကိုပြောပြပါရစေ။
စင်စစ်အားဖြင့်ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည် SEO အရောင်းအဝယ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်လိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထိုအခါ AutoSEO လှုပ်ရှားမှုများ သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲသိလား
AutoSEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်၎င်းကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာများစွာအတွက်သက်သေပြပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ဆိုဒ်အတွက်ချွင်းချက်မထားပါနှင့်။ AutoSEO ၏ရလဒ်အချို့ကိုရှာဖွေပါ။
AutoSEO ဖြင့် SEO အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ဂူဂဲလ်အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်အချိန်ကျပြီ။
မည်သည့်နေရာနှင့်ဘာသာစကားအတွက် SEO မြှင့်တင်ရေး
သင့်ရည်မှန်းချက်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ပါ ။ Semalt တွင် ၁ နှစ်၊ ၆ လ၊ ၃ လနှင့်တစ်လစာပေးသွင်းမှုများပင် ရှိသည်။ Semalt သည်ဘတ်ဂျက်အားလုံးနှင့်အညီလိုက်ဖက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
FullSEO သည် ဂူဂဲလ်၏ထိပ်ဆုံးသို့ ဝင်ရောက်ရန်အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပတွင်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းသင့်အားအကောင်းဆုံးရလဒ်များပေးသည်။
ဂူဂဲလ်ထိပ်ရောက်ရန်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ပရိသတ်ကိုတိုးပွားစေရန်၊ အသွားအလာနှင့်ရောင်းရန်အချိန်တိုအတွင်းအလျင်မြန်ဆုံးအချိန်၌ FullSEO: ကြိုးစားကြည့်ပါ IT အားဖြင့်သင့်အားတိုးတက်စေရန် SEO အဆင့်မြင့်သောနည်းဗျူဟာများကိုတီထွင်ခဲ့သည် ။
ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် FullSEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ကို ဂူဂဲလ်ထိပ်သို့ရောက်ရန် သံသယရှိစရာမလိုပါ။
FullSEO သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအမြန်ဆုံးတိုးတက်စေရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပရိသတ်တိုးတက်စေရန် SEO ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ပြီးပြည့်စုံသောထိရောက်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရတာကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ထောက်ခံချက် များဖြင့် ကြည့်ရှု ခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရှာဖွေပါ ။ +32 ဗီဒီယိုထောက်ခံစာများ၊ +146 စာဖြင့်ရေးသားထားသောထောက်ခံစာများနှင့် +24 ကိစ္စများ။
သင်တို့သည်လည်းထိုကျေနပ်မှုရှိဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဟုတ်တာပေါ့၊ သင်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်၊ Semalt သည်သင်၏လက်ရှိရာထူးမှ Google search engine ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင့်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ Semalt ၏ SEO ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သိသိသာသာကြီးထွားလာနေသော Zaodrasle ၏စီအီးအို Mr Greta နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပမာအားဖြင့်ဤကိစ္စသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Semalt နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ သူပြောခဲ့သည်မှာ - "၀ န်ဆောင်မှုကအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါကျေနပ်မိတယ်၊ အော်ဂဲနစ်ထိခိုက်မှုတွေတိုးများလာတယ်။ အဓိကသော့ချက်စာလုံးတွေအများကြီးကထိပ်ဆုံး ၁၀ နေရာမှာရှိတယ်။ သူ့ကိုလွမ်း။ and ည့်သည်မဟုတ်၊
SEO ကိုလှုံ့ဆော်မှု၏ ၅ လမျှသာကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး Zaodrasle ကို Google TOP-5 နှင့် TOP-3 တွင်ခြေကုပ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုကြည့်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကို ဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Semalt သည်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၂၀ ကျော်ပါ ၀ င်သော ၁၆ နှစ်ကျော် SEO အတွေ့အကြုံရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့မှလာသည့်မည်သည့်လိုအပ်ချက်ကိုမဆိုအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်အချိန်မရွေးတွေ့ဆုံနိုင်သည်။
ဘာသာစကားအခက်အခဲမရှိဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဘယ်ဘာသာစကားကိုပဲပြောပြောငါတို့မန်နေဂျာများကသင်နဲ့အတူဘုံဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ တူရကီနှင့်အခြားဘာသာစကားများစွာကိုလည်းပြောဆိုကြသည်။
Semalt သို့မဟုတ် Turbo ဇာတ်လမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တစ်ချက်
၂၀၁၄ မှာကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးပန်းအိုးဟောင်းတစ်ခန်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ယခင်ရုံးပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့လိပ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Turbo လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ လိပ်တွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိပြီးရုံးသုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသစ်ဟာကျယ်ဝန်းတဲ့ငါးမွေးကန်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာငါတို့ရဲ့ mascot ဖြစ်လာတယ်။